Rivo-doza Irma: Tatitra avy Amin’ny Sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina Xhosa
Tatitra Momba ny Rivo-doza Irma
NEW YORK—Ireto ny tatitra voaray avy amin’ny biraon’ny sampana any Barbade, Etazonia, Frantsa, ary Repoblika Dominikanina, momba ny vokatry ny Rivo-doza Irma tamin’ireo rahalahintsika:
Ireto avy no tratran’ny loza, amin’ireo faritra iandraiketan’ny sampan’i Barbade: Anguilla, Antigua sy Barbuda, Montserrat, Saba, Saint-Eustache, Saint-Christophe sy Niévès, ary Saint-Martin (Holandey). Ny tany Barbuda sy Saint-Martin no tena voa mafy.
Nosy kely misy mponina 1 800 eo ho eo i Barbuda. Araka ny tombantombana, dia ny 95 isan-jaton’ny trano any no simba, ary tapaka ny jiro sy rano. Noho izany, dia nambara hoe faritra tra-boina io nosy io, ary mitovy amin’ny fepetra ho an’ny tany misy hotakotaka no nampiharina tany. Mpitory 11 no ao Barbuda, ary tsy nisy naninona izy ireo. Efa nafindra any amin’ny nosy Antigua tsy lavitra eo izy rehetra, ary misy Komitin’ny Vonjy Rano Vaky (KVRV) mikarakara azy ireo.
Mpitory 700 eo ho eo no mipetraka ao amin’ny nosy Saint-Martin (Holandey sy Frantsay). Anabavy iray tamin’ireo no naratra. Nisy solontena maromaro nalefa mba hanampy an’ireo namantsika any, ka anisan’izany ny mpitsabo matihanina sy rahalahy vitsivitsy avy any amin’ny sampan’i Barbade sy Frantsa.
Ireto avy no tratran’ny loza amin’ny faritra iandraiketan’ny sampan’i Frantsa: Goadelopy, Martinika, Saint-Barthélemy, ary Saint-Martin (Frantsay). Araka ny tatitra voaray, dia tsy nisy hoe maty na naratra tany Goadelopy sy Martinika.
Ravarava kosa ny nosin’i Saint-Barthélemy, ary tapaka ny fifandraisana amin’ireo mpitory ao amin’ilay nosy. Nahazo tatitra avy amin’ny mpiandraikitra ny faritra anefa ny biraon’ny sampana hoe nieren-doza avokoa ireo mpitory 30 mipetraka any, ary kelikely ihany no simba amin’ny Efitrano Fanjakana. Nandefa rano sy sakafo ary fanampiana hafa ho an’ireo rahalahintsika any Saint-Barthélemy sy Saint-Martin ireo Vavolombelona any Goadelopy sy Martinika, nosy eo akaiky eo. Misy KVRV natsangana mba handrindra izany.
Fanampiana halefa ho an’ny tra-boina, nangonina tao amin’ny Efitrano Fivoriambe iray any Goadelopy.
Tratran’ny loza koa ny tany amin’ny Repoblika Dominikanina. Nanapa-kevitra ny Komitin’ny Sampana fa hanangana KVRV dimy, izay komity maharitra avokoa, mba hikarakara an’ireo mpitory 38 000 manerana an’ilay tany. Andro vitsivitsy talohan’ny hahatongavan’ny Rivo-doza Irma, dia nasain’ny mpiandraikitra ny faritra nitsidika ny mpitory rehetra ny anti-panahin’ny fiangonana. Nila natao azo antoka mantsy hoe manana an’izay rehetra ilaina ny tsirairay, sady efa nandray fepetra fiarovana. Natahorana kokoa hisy tondra-drano tany amin’ny morontsiraka avaratra, ka nisy mpitory 1 273 nasain’ny anti-panahy nifindra amin’ny toerana azo antoka kokoa. Nisy mpitory 2 068 koa nipetraka tamin’ny trano natahorana ho rava, ka nasaina nankany amin’ny Efitrano Fanjakana na tany amin’ny fianakaviana Vavolombelona nanana trano matanjaka kokoa.
Nisy simba kely ihany ny Efitrano Fanjakana vitsivitsy, izay vao naorina. Trano dimy nipetrahan’ny fianakaviana Vavolombelona ihany koa no simba be. Efa miezaka manamboatra an’izany izao ireo fiangonana eo an-toerana sy ny KVRV. Tsy nisy Vavolombelona maty na naratra mafy.
Ireto avy no tratran’ny loza, amin’ireo faritra iandraiketan’ny sampan’i Etazonia: Bahamas, Floride, Géorgie, Porto Rico, Nosy Turks sy Caïques, ary ny Nosy Vierges Amerikanina sy Britanika. Efa voalaza tamin’ny tatitra teo aloha fa rahalahy iray sy anabavy iray no namoy ny ainy. Ankoatra an’ireo koa anefa dia Vavolombelona 6 no naratra ary 3 000 mahery no nafindra toerana. Nanolo-tena hampiantrano azy ireo ny rahalahy an-jatony mipetraka any Géorgie sy Floride afovoany.
Raha ny tany Floride indray no resahina, dia nafindra tany amin’ny Efitrano Fivoriambe tao Palm Beach Andrefana ireo mpiasa tao amin’ny Biraon’ny Fandikan-teny Mitokana (BFM) any Fort Lauderdale. Nijanona tao nandritra ny andro maromaro izy ireo. Simba ny fantson-dranon’ny birao tao amin’ny BFM, ary tapaka nandritra ny andro vitsivitsy ny jiro sy ny Internet. Efa vita anefa ny fanamboarana an’ireo, ka miverina amin’ny laoniny izao ny asa.
Nafindra toerana daholo ny mpianatra nanao sekoly ara-baiboly tany Palm Coast, any Floride. Nisy kilasy telo amin’ny Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana tamin’izay, ary vao tonga koa ireo mpianatra hanao ny Sekolin’ny Mpiandraikitra ny Faritra sy ny Vadiny. Olona 20 teo ho eo sisa no nijanona tao amin’ilay toerana. Samy tsy nisy naratra izy ireo, ary tsy dia nisy simba koa ireo trano fanaovana sekoly, fa ny jiro ihany no tapaka.
Fanampiana halefa ho an’ny tra-boina, nangonina tao amin’ny Efitrano Fivoriambe iray any Caguas, Porto Rico.
Miezaka mafy ny Biraon’ny Vonjy Rano Vaky sy ny Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana eo An-toerana, mba ho tonga soa aman-tsara any amin’ireo rahalahy ny fanampiana ilainy, sady ho voarain’izy ireo haingana.
Nisy toby maromaro natsangana tany Etazonia, mba hanomezana sakafo sy rano ho an’ireo rahalahy tra-boina any afovoan-tany. Nasiana KVRV kosa any Porto Rico mba hanampiana an’ireo tra-boina any amin’ireo nosy.
Ny tany Karaiba indray, dia trano 61, fara fahakeliny, no nisy simba, ary 55 kosa no simba be. Efitrano Fanjakana roa koa, fara fahakeliny, no nila fanamboarana lehibe.
Tondra-drano eo ivelan’ny Efitrano Fanjakana iray any amin’ny Nosy Turks sy Caïques.
Nisy rahalahy maromaro avy any amin’ny biraon’ny sampan’i Etazonia sy avy any amin’ny foibe, nitsidika an’i Floride sy ireo nosy tratran’ny loza, mba hanampy an’ireo rahalahy. Mbola mitohy koa ny fanadihadiana momba ny vokatr’ilay loza.
Tsy manadino an’ireo rehetra tratran’ny Rivo-doza Irma isika, ary mivavaka ho azy ireo sy ho an’ireo mpiasan’ny vonjy rano vaky rehetra, izay miezaka mikarakara sy mampahery an’ireo tra-boina.—Romanina 15:5; 2 Korintianina 1:3, 4, 7; 8:14.
Barbade: John Medford, +1-246-438-0655
Frantsa: Guy Canonici, +33-2-32-25-55-55
Repoblika Dominikanina: Josué Féliz, +1-809-595-4007